တွစ်တာတွင်ပျံ့နှံ့သွားသောလေထီးခတ်စာအုပ် 'MILK AND VINE' ကိုရေးသားခဲ့သော TEMPLE စုံတွဲကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည် - နှုန်းထားများ
တွစ်တာတွင်ပျံ့နှံ့သွားသောလေထီးခတ်စာအုပ် 'Milk and Vine' ကိုရေးသားခဲ့သော Temple စုံတွဲကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်
အခါအားလျော်စွာ၊ စာရေးသူအသစ်သည်ပရိသတ်ကို၎င်း၏ကြံစည်မှုနှင့်ဇာတ်ကောင်များဖြင့်ဖမ်းဆီးနိုင်သည့်စာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်, စပျစ်နွယ်ပင်တွေအကြောင်းစာအုပ်, Rupi Kaur ရဲ့နှင့်အတူပေါင်းစပ် နို့နှင့်ပျားရည် လူတိုင်း၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။
Temple တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများ Emily Beck နှင့် Adam Gasiewski သည်သူတို့၏စာအုပ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်ကိုမူလကရေးသားခဲ့သည် နို့နှင့်စပျစ်နွယ်ပင် Amazon ၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဝေသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်၎င်းတို့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်ဖြစ်မလာမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူငယ်ချင်းများပျော်မွေ့နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ (လက်ရှိတွင် Amazon ၏နံပါတ် ၂ တွင်ရှိသည် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရင်း ။ )
သူတို့၏အောင်မြင်မှုသည်စိတ်ကိုကြည်နူးဖွယ်ကောင်းစေသော်လည်းကျောင်းသားနှစ် ဦး စလုံးသည် Temple ရှိနှိမ့်ချသောပထမတန်းကျောင်းသားများသာဖြစ်သည်။ သူတို့သူငယ်ချင်းများကိုမျှဝေရန်ရယ်စရာစာအုပ်တစ်အုပ်ပြုလုပ်ချင်ကြသည်။ အခုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ပါရမီစာအုပ်အတွက်ချီးမွမ်းခံခဲ့ရသည်။
- Adam Gasiewski (@ a_DAMN7) နိုဝင်ဘာ 3, 2017
အဆိုပါ Kardashian ၏ရှေးအကျဆုံးထွက်သောသူသည်
The Tab Temple သည်မမျှော်လင့်ဘဲနာမည်ကြီးကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်သူတို့၏မကြာသေးမီကအောင်မြင်မှုနှင့်သူတို့ထံမှနောက်ထပ်ဘာများမျှော်လင့်နိုင်မည်ကိုပြောခဲ့သည်။
သူတို့စာအုပ်၏အောင်မြင်မှုသည်အာဒံနှင့်အမ်မလီတို့ကိုအခြားသူများထက် ပို၍ အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
အာဒံ ဖြေ - တစ်နေ့ကျရင်ငါတို့တွေ့ရတဲ့ Barnes နဲ့ Noble ကိုလှည့်ပတ်နေခဲ့တယ် နို့နှင့်ပျားရည် ။ ကျနော်တို့အရင်ကကြားခဲ့ဖူးတယ်၊ ကျနော်တို့စာအုပ်၏ကောင်းသောအဘို့ကိုတဆင့်လှန်ကြည့်ကျနော်တို့စိတ်ကူးကြိုက်တယ်။ ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးဖို့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဆန္ဒရှိခဲ့တယ်၊ မကြာသေးခင်က Amazon's Kindle ထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်းအကြောင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်၊ အဲဒီမှာဘယ်သူမဆိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာအခမဲ့တင်ပို့နိုင်တယ်။ ၎င်းကို Kindle သို့မဟုတ် paperback ပြုလုပ်ပြီး၎င်းကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ ဒီဟာကတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ငါမြင်ပြီးကျွန်တော်အတူတူစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသင့်တယ်လို့အမ်မလီကိုပြောခဲ့တယ်။
ငါ Emody ကိုပြောလိုက်တာကဒီဟာကစကားလုံးတစ်လုံးပဲဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းက Emines ကို Vines ကဗျာအဖြစ်သုံးဖို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်အထိအတိအကျမသိဘူး။ ရယ်စရာကောင်းပေမယ့်လူတွေဟာဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကဗျာရဖို့မျှော်လင့်ကြတယ်၊
အခုပဲပြီးတယ် @ a_DAMN7 နှင့် @emiilybeck နောက်ဆုံးစာအုပ်နှင့်ငါ SHOOK ဖြစ်သည် pic.twitter.com/I22yfphMtb
- Vaitie Ceech (@CaitieVeech) နိုဝင်ဘာ 9, 2017
အမ်မလီ ဖြေ - အာဒံကတွစ်တာမှာတင်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေကဒီစာအုပ်ကိုငါတို့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ဖန်တီးခဲ့တာလေ။ ညမှာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့သွားပြီး၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော retweets နှင့်အကြိုက်ဆုံးများနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်နိုးထခြင်းများကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေပါသည်။ ငါကဲ့သို့ 'အိုးအိုဟေ့!'
အာဒံ ဖြေ - တွစ်တာဟာအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လို့နောက်မှမြင်ရတဲ့နေရာမှာတင်ပို့ဖို့အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းပဲ။ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၃၀ ကြားရှိသူများသည်စပျစ်နွယ်ပင်များနှင့်နာမည်ကျော်ကြားသူများဖြစ်သည်ကိုသိကြသည် နို့နှင့်ပျားရည် ။ စပျစ်နွယ်ပင်များသည်တွစ်တာတွင်များစွာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်လူအားလုံးသည်စာအုပ်၏အယူအဆကိုနားလည်ပြီးအမှန်တကယ်ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။
တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ် Milk and Vine သည်ယခုအခါ Milk နှင့် Honey ထက်ကျော်လွန်ပြီးကမ္ဘာ့အရောင်းရဆုံးစာအုပ် ၁၀ ခုတွင်ပါဝင်သည်။ ?????? pic.twitter.com/wrQCMe2zVH
- Adam Gasiewski (@ a_DAMN7) နိုဝင်ဘာ 7, 2017
အမ်မလီ ဖြေ - ငါတို့မိသားစုတွေကိုမူလကမပြောခဲ့ဘူး။ ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေကိုချက်ချင်းပဲငါတို့မိသားစုတွေမသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာစာအုပ်တစ်အုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောပြရမှန်းမသိခဲ့ဘူး၊
အာဒံ ဖြေ - စာအုပ်ထဲကအယူအဆပဲ။ ဒါကတကယ့်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးညစ်ပတ်သွားတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့မိသားစုကိုတကယ်မပြောချင်ဘူး။ ကျွန်တော်နံပါတ် ၁ အရောင်းရဆုံးနံပါတ်အထိရောက်တဲ့အထိစောင့်ပြီး Amazon မှာနံပါတ် ၁ ရောင်းသူအကောင်းဆုံးကိုစစ်ဆေးဖို့မိဘတွေကိုစာပို့ခဲ့တယ်။
အမ်မလီ ဖြေ - ကျွန်တော့်မိဘတွေကကျွန်မကိုတကယ်ခေါ်ပြီး 'မင်းရေးခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်ကဘာလဲ'
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း၏အမေကကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအားစာအုပ်ဝယ်ယူလိုက်ကြောင်းအမေအားပြောပြသည်။ ဒီတော့အမေကစာအုပ်အကြောင်းမေးတဲ့အခါ 'ငါကပုံမှန်စာအုပ်ပဲ' လို့ပြောလိုက်တယ်။
ငါနို့နှင့်စပျစ်နွယ်ပင် viral သွားလေ၏ငါ့မိဘများကိုဘယ်လိုသွားမလဲ
- အမ်မလီ Beck (@emiilybeck) နိုဝင်ဘာ 8, 2017
အာဒံ ။ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်။ ကျနော်တို့စင်တာစီးတီးရဲ့ Barnes နှင့် Noble ထံသို့သွား။ ကျနော်တို့စာအုပ်ကြည့်ရှုကြ၏ နို့နှင့်ပျားရည် ။
နို့နှင့်စပျစ်နွယ်ပင် အမေဇုံအပေါ်အောက်တိုဘာလ 22 ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဲဒီရက်တွေကြားကရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာငါတို့ရေးခဲ့တယ်။ ငါစာအုပ်၏ tweets အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်သို့သွား။ ဒါကြောင့်ငါအောက်မှာ link ကိုတင်ခဲ့သည်နှင့်ကြွင်းသောအရာသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အာဒံ ဖြေ။ ကျနော်တို့စာအုပ်ကတကယ်ကိုနိမ့်ကျတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့တခြားစာအုပ်မရှိဘူး။ အကန့်အသတ်မရှိပေမယ့်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကစာအုပ်တွေကိုလက်လီအရောင်းဆိုင်များထဲရောက်အောင်အေးဂျင့်များနှင့်ထုတ်ဝေသူများနှင့်ပြောတာပါ။ Barnes နှင့် Noble တို့ကကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်များကိုသူတို့၏စတိုးဆိုင်များသို့ပို့ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်သည်။ ငါတို့ကမ္ဘာအနှံ့သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်
အမ်မလီ ။ ငါအရမ်းထိတ်လန့်နေပြီးတွစ်တာနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။
အာဒံ ဖြေ - မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပျက်ဖို့အများကြီးပဲ။ ဤအရာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အချိန်ပိုယူရသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါတို့စာအုပ်ဘယ်မှာလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဆိုရင်အိုဘားမားဘေးကနေ၊ ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့behindရာမကြေညာသူတွေနောက်ကလူတွေပါ။ ကျနော်တို့ရုံလေပြေနေစဉ် 24 နာရီကာလ၌သူတို့ကိုလွန်။ နေ့တိုင်းကတည်းကမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အမ်မလီ ဖြေ - ငါ့ကြမ်းပြင်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကများသောအားဖြင့်ငါ့ကိုကြည့်ကြတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်တံခါးကိုလာခေါက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုစာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်းပေးခဲ့တယ်။ ငါက 'ကောင်းပြီ!'
အိမ်မှာရှိသောကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများကကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းမွမ်းမံနေကြသည်၊ သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောသူများနှင့်ထိုစာအုပ်သည်မည်မျှအောင်မြင်သည်ကိုပြောပြနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter ကိုအမြဲစစ်ဆေးလေ့ရှိသော်လည်းထိုစာအုပ်နှင့် ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မနှစ်သက်ပါ။
အာဒံ ဖြေ - ကျွန်တော့်အတွက်ဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ငါ့ကိုလုပ်နေတာစောင့်ရှောက်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကလည်းအလွန်ထောက်ခံကြသည်။
ငါ၏အကြမ်းပြင်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်သူမ၏ BF ကျော်ကြားဖြစ်ခြင်းမှ s / o https://t.co/bq6quZn5XP
- delaney (@ dkmills91) နိုဝင်ဘာ 7, 2017
@emiilybeck @ a_DAMN7 ငါဖတ်ဖို့စောင့်မျှော်လို့မရဘူးဒီတော့မာနထောင်လွှားတဲ့သူမဖတ်ဖို့ဟေ့ဟ် #milkandvine pic.twitter.com/iJIGCMvYvs
- Megan ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ (@megannescio) နိုဝင်ဘာ 9, 2017
မင်းရဲ့အခန်းဖော်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်သွားတဲ့အချိန်‼ ️‼ ️ https://t.co/4hA5af9s25
- အန်း (annefrascella16 @) နိုဝင်ဘာ 9, 2017
အမ်မလီ ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သောမိန်းကလေးကသင်ဟာ oatmeal ပန်းကန်လုံးထက်ပိုထူတယ်။
အာဒံ ဖြေ - Trey တစ်ယောက်ဟာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပါ။
နို့နှင့်စပျစ်နွယ်ပင် (2017) pic.twitter.com/4ANgAHXGaq
- raddison (@MaddisonGonella) နိုဝင်ဘာ 8, 2017
အာဒံ ဖြေ - ကောင်းပြီ၊ အခုတော့ငါတို့ကထုတ်ဝေသူတစ် ဦး ကိုရွေးလိုက်ပြီးဒီအရာအားလုံးမှပြန်လည်နာလန်ထူလာပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်များနှင့်ထုတ်ဝေရေးသဘောတူညီချက်များအတွက်အခြားအတွေးအခေါ်များကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ကျနော်တို့ကပိုရေးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရေးဆွဲဖို့ပဲလိုတယ်။
သင်သည်သူတို့၏အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ကိုဝယ်နိုင်သည် ဒီမှာ နောက်အနာဂတ်မှာသူတို့နောက်ထပ်စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေလိမ့်မယ်။
ဤအရာအားလုံးသည်ကံကြမ္မာ၏ရိုက်ကူးရာနေရာများဖြစ်သည်။ Netflix on the Winx Saga
SUNY Geneseo trans ကျောင်းသားများသည်လူမှုဗေဒပါမောက္ခ၏ transphobic ဉာဏ်စမ်းပဟေtoိများကိုတုံ့ပြန်ကြသည်
Cambridge Best Bums 2020: အောင်မြင်သူများကိုတွေ့ဆုံပါ
ကောင်းသောသတင်း၊ လူတိုင်း။ ဤအသေးအဖွဲမေးခွန်းများအတွက်စစ်မှန်သော Futurama ဝါသနာရှင်တစ် ဦး တည်းသာအမှတ်ရလိမ့်မည်
Paris Geller သည် Gilmore Girls ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှကျွန်ုပ်ကိုဖျောက် ဖျက်၍ မရပါ